Muxuu Trump ka sameyndoonaa arrinta Afghanistan? - BBC News Somali
Image caption Dalka Afghanistan waxaa ku sugan 13 kun oo ciidamo NATO ah, badan koodna waxay ka socdaan Mareykanka
Ayadoo Donald Trump uu la qabsanayo gurigiisa cusub ee Aqalka Cad, mid ka mid ah xaaladaha uu riixayo waxaa ka mid ah dagaalka Afghanistan.
Hase yeeshee, Trump wax badan ka muusan dhihin dagaalka ugu waqtiga dheer ee uu Mareykanka ku jiro. Arrimaha yar ee uu ka sheegay dagaalkaas ayaa is burinaya.
Xilli sii horeysay, wuxuu dagaalka Mareykanka ee Afghanistan ku tilmaamay "masiibo", wuxuuna sheegay inay ciidammadooda kala soo baxayaan.
Al-Qacida oo hogaamiye sare laga dilay
Balse, markii uu la hadlay madaxweynaha Afghanistan, Ashraf Ghani, 2-dii December, wuxuu sheegay in Mareykanka uusan ka quusaneynin caawinta dalkaas.
Ka dib, wuxuu ku guuldareystay inuu Ghani ku casuumo munaasabaddii dhaarintiisa. Waxaa soo baxaya warar ku saabsan in madaxweynaha cusub aysan ahmiyad u lahayn Afgahanistan.
Image caption Madaxweyne Ashraf Ghani iyo Obama oo ku kulmay Washington sanadkii 2015-kii.
Ururka Taliban ayaa dhowaantan ugu baaqay Donald Trump inuu ciidammada Mareykanka ka saaro Afghanistan.
"Waxba kumeydaan guuleysan," ayey tiri kooxda oo intaa ku dartay, " wax aan ka ahayn daadinta dhiiga shacabka aan waxba galabsan ee Afghanistan, iyo burburinta deegaanno iyo beero."
Qiimeynta ay sameeyeen saraakiisha Mareykanka ayaa muujineysa inaan hormar badan la sameyn.
Caqabadda Trump ayaa lagu soo koobay arrin argagax leh, taas oo ay soo saareen hay'adda la socodka dib u dhiska Afghanistan ee Maraykanka.
Sidoo kale waxaa arrintaasi ka hadlay Taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afghanistan, John F Sopko.
Sopko wuxuu sheegay in Mareykanka uu waqti badan ku bixiyay dib u dhiska dalka AFghanistan.
Wuxuu intaa raaciyay in xittaa qaaradda Yurub, dagaalkii labaad ka dib, inuusan Mareykanka waqti intaa la eg uusan ku bixin.
Boqolkiiba 63 ayey dowladda Afghanistan ka maamushaa dalka, waxaa sare u kacay wax soo saarka maandooriyaha opium-ka, sidoo kale musuqa ayaa heer aad u sareeya gaaray.
Waxaa muuqanaya in qeybo ka mid ah dalka ay dhibaatooyiin ay ka jiraan, ka dib markii ciidamada Afghanistan aanan si wanaagsan loogu ogolaan ka qeybgalka dagaalkii dhowaantan ka dhacay Helmand.
Caziz Axmad Shafeec wuxuu aaday xarunta gobolka ee Lashkargah, wuxuuna la socday ciidamo kale oo kuwa qaranka ka mid ah.
Kolonyada waxay hadda ku sugan yihiin duleedka magaalada, halkaas oo ah furunta hore ee dagaalka hadda.
Image caption Askeri Afghani ah oo BBC-da u sheegay inaysan xittaa haysan waxyaabaha aasaasiga ah
Ururka Taliban ayaa gacanta ku haya inta badan gobolka Helman.
Gobolkaas ayaa ah meesha ay ku dhinteen inta badan ciidamada Britain looga laayay Afghanistan oo gaaraya 456 askeri.
Hadana dib u qaabeynta lagu sameeyay ciidammada 215-Corps oo ay maamulaan Mareykanka, waxay u muuqataa inaysan si dhab ah dagaalka ugu jirin.
Ciidamada Afghanistan waxay ka cabanayaan inaysan xittaa helin waxyaabaha aasaasiga u ah dagaalka iyo noloshooda.
Beeraha maandooriyaha opium ee Afghanistan oo sare u kacay
Dad Imaaraadka Carabta u dhashay oo Afghanistan lagu laayay
"Muddo bil ah waxaan sheegeynay inaanaan haysanin rasaas nagu filan, balse, waxba nalama soo gaarsiin," ayuu u sheegay BBC-da mid ka mid ah askarta oo lagu magacaabo Xayatullah.
"Cadowgeena xabad ayey nagu soo ridayaan, laakiin anaga ma haysano rasaas nagu filan oo aan ugu jawaabno."
Istiraatiijiyad cadeyneysa danaha gaarka ah
Waxay ciidammadan dalbanayaan in madaxweynaha cusub ee Mareykanka uusan bedelin gacanta ay siinayaan dowladda Afghanistan.
"Askeri Afghani ahaan, waxaan weydiisanayaa madaxweyne Donald Trump inuu sii wado dagaalka halkan ee lagula jiro Taliban", ayuu yiri Jan. Maxamed Weli Axmedzay, oo ah taliyaha ciidamada 215-Corps.
"Hadduu taageero dheeraad ah na siin karo, waan tirtiri karnaa argagixisada."
Inta badan ciidammadii ajaaniibta ee ku sugnaa Afghanistan waxay dalkaasi ka bexeen dhammaadkii 2014-kii, balse weli waxaa ku sugan 13 kun oo u badan Amerikaan.
Image caption Inta badan Mareykanka ciidamadii ka joogay Afghanistan dib ayey dalkooda ugu noqdeen, si aysan askar badan ugaga dhiman dalkaas.
Janaraal Charlie Cleveland, Afhayeenka Ciidammada gurmadka, wuxuu aaminsan yahay in Mareykanka weli uu istiraatiijiyad cad ka leeyahay Afghanistan.
Wuxuu sheegay in ciidamada Mareykanka ay halkaasi u joogaan laba howl:
Tababaridda iyo caawinta ciidammada Afghanistan
Bartilmaameedsiga ururada "argagixisada" ah
Wuxuu sheegay in ayadoo xaaladda aysan habooneyn, in ciidammada Afghanistan ay maareeyeen inay bedelaan xaaladdii xumeyd ee 2015-kii, ayna ka dhigeen mid isu dheellitiran oo dowladda ay jeclaatay.
sikastaba, waxaa weli loo baahan yahay in waxbadan la sameeyo.
Qiyaastii 5,000 oo askeri ayaa dowladda Afghanistan looga dilay dagaallada lagula jiro Taliban.
Image caption Ciidammada Afghanistan hadda waxay dagaal kula jiraan Taliban iyo Kooxda isku magacawda Dawladda Islaamka
Ayadoo ay jirto hubanti la'aanta siyaasadda Mareykanka, dalalka kale waxay weli isku dhejinayaan Afghanistan.
Bishii la soo dhaafay, Ruushka wuxuu martigeliyay kullan looga hadlayay mustaqbalka dalkaasi, waxaana ka qeybgalay xubno sare oo ka socday Shiinaha iyo Pakistan.
Waxaa la cadeeyay in lala hadlay ururka Taliban si dagaalka xal looga gaaro.
Hadaba, su'aashu waxay tahay, muxuu madaxweyne Trump sameyn doonaa?
Unesco oo sheegtay inaan la gaari karin hiigsiga waxbarashada ilaa 2042
Labo ka mid ah wasiirradiisa ayaa fikir ka bixin doona arrintaas.
Xogahaya difaaca ee Trump uu magacaabay, Janaraal James Mattis, wuxuu ahaan jiray taliyihii ciidamada Afghanistan ku sugan.
Wuxuu horey uga hadlay sida loogu baahan yahay in Pakistan loo sheego inay qaado tallaabo ay wax uga qabaneysa Taliban iyo ururka Xaqani.
Image caption Ciidammadii Midowgii Soviet waxay Afghanistan ka bexeen sanadkii 1988-dii, Balse Ruushka wuxuu la hadlayaa Taliban
La taliyaha arrimaha amniga ee madaxweynaha Cusub Michael Flynn ayaa sidoo kale ka hadlay in Pakistan looga baahan yahay qaadidda tallaabo wax ku ool ah oo ka dhan ah dagaalyahannada Talibaan ee gabaadka ka dhiganaya dalkaasi.
Madaxweyne Trump wuxuu ku celceliyay inuu doonayo inuu wax ka qabto ururka la baxay Khilaafada Islaamka.
Ka bixdda Afghanistan ayaa sababi karta in arrintaas ay adkaato, ayadoo Afghanistan ay kooxda Daacish ku yeelatay dagaalyahanno, labadii sano ee la soo dhaafay.
Marka waxay u muuqataa inay u badan tahay in dadaalkiisa ah in ciidamadooda dibada ka dagaallama dib dalka ay ugu noqdaan, Madaxweyne Trump wuxuu si fudud u shaacin karaa inaysan dano muhiim ah ka lahayn Afghanistan, ciidammadana uu ka saaro.
Asaga iyo lataliyayaashiisa waxay hubaashii aysan dooneyn inay masuul ka noqdaan dagaalka ugu waqtiga dheer ee Mareykanka uu ku jiro, kaas oo dad badan ay u arkaan inay caddahay in lagu guuldareystay.